International Intellectual pfuma magweta - Law & More
nezvinetso zvevatengi. ”
Kune mhando dzakasiyana dzemitemo yeuchenjeri yezvivakwa, chimiro, huwandu uye urefu hwazvo zvinosiyana kubva kune imwe chivakwa kurudyi. Dzimwe nguva kodzero dzepfuma dzepfungwa dzakawanda dzinogona kunyoreswa panguva imwe chete. Law & More'' hunyanzvi mumunda wezvemidziyo yezvinhu mutemo unosanganisira copyright, trademark mutemo, patents uye patents nemabhizimusi mazita. Nekubata Law & More iwe unogona kubvunza nezvezvingabvira.
Copyright inodzivirira mabasa emusiki uye inopa musiki mvumo yekuburitsa, kubereka nekuchengetedza basa rake kubva mukushandiswa zvisirizvo nevanhu vechitatu. Izwi rekuti 'basa' rinosanganisira mabhuku, mafirimu, mumhanzi, pendi, mifananidzo uye zvivezwa. Kunyangwe copyright isinga fanirwe kunyorerwa, sezvo ichingoitika otomatiki kana basa ragadzirwa, zvinokurudzirwa kuve nekodhi rekodhi. Kuti umise kodzero, unogona kugara uchiratidza kuti basa raivepo pane rimwe zuva. Ungade kunyoresa yako copyright uye chengetedza basa rako kune vanhu vanokanganisa copyright yako? Ndokumbirawo ubate magweta pa Law & More.
Mutemo wekutengesa unoita kuti zvive nyore kunyoresa chiratidzo chako, kuti pasave neanogona kushandisa zita rako pasina mvumo yako. Kodhi yekutengesa inosimbiswa chete kana iwe uchinyoresa chiratidzo mune yevatengesi chiratidzo. Law & More'' Magweta achafara kukubatsira neizvi. Kana chiratidzo chako chakanyoreswa uye chikashandiswa pasina mvumo yako, uku ndiko kukanganisa kwekutengeserana. Wako Law & More Gweta richazokwanisa kukubatsira kuti utore matanho ekuzvidzivirira.